Jabuuti: Madaxweynaha Puntland oo ka qaybgalay caleemasaarka Madaxweynaha Jabuuti
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa saaka 08-May-2016 ka qayb galay caleemo saarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo hadda ka socota xarunta guriga ummadda ee dalka Jabuuti.
Madaxweynaah dawladda Puntland ayaa intii uusan ka qayb gelin munaasabadda caleemo saarka ka hor waxaa uu kulamo kala duwan oo isugu jira salaan iyo is waraysi guud kula qaatay Hotel Kempinski Ugaas Mustafe Rooble oo ah ugaaska guud ee Beesha Ciise iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda Jabuuti.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waftigiisa ayaa si aad u meeqaam sarraysa loogu soo dhoweeyey xarunta guriga ummadda oo ay ka socoto munasaabadda caleema saarka Madaxweynaha dalkaasi Jabuuti.
Munaasabadda Caleemo saarka Madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa sidoo kale ka qayb geleya Madax badan oo ka kala timi waddada adduunka oo ay ku jiraan madaxda kala duwan dalka Soomaaliya iyo qaaradda Afrikaba.
Waa markii Afraad ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle loo doorto xilkaasi, goordhow ayaanu idiin soo gudbin doonaa sawirro iyo warbixino dheeraad ah oo ku saabsan caleemo saarka iyo khudabadda Madaxweynaha dawladda Puntland.